Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo loogu baaqay in uu kala diro golaha wasiirrada | Risala FM-The Voice of Horn Africa
Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo loogu baaqay in...
Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo loogu baaqay in uu kala diro golaha wasiirrada
warka Risala fm	0
Xildhibaan ka tirsan aqalka baarlamaanka ee dalka oo kasoo jeeda Gobolka Koonfurta Rift ayaa madaxweyne Uhuru Kenyatta ugu baaqay in uu gabi ahaanba kala diro xukuumadda, maadaama sida uu sheegay ay wax qaban weysay dowladda.
Johana Ng’eno oo ah mudanaha baarlamaanka u matala degmada Emurua-Dikirr ayaa dalbaday in madaxweynaha uu soo dhiso gole wasiirro oo cusub, si ay howlada xukuummada ee socon kari waayay u qabtaan.
Xildhibaankaan oo ah siyaasi ka tirsan xisbiga (Kenya National Congress) ayaa ku andocooday in ku dhawaad dhamaan wasiirrada ay hareeyeen eedeymo la xiriira dhinaca musuqmaasuqa, sidaas awgeedna loo baahanyahay in xilalka laga wada wareejiyo.
Hadalka xildhibaanka ayaa yimid xili ay isagoo tarayaan baaqyada ku aadan in xafiisyada laga eryo qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirrada.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa si weyn loogu cadaadinayaa in uu xil ka qaadis ku sameeyo wasiiradda dowlad wadaajinta iyo qorsheynta qaranka Marwo Anne Waiguru.
Ms Waiguru ayaa loo jeediyay eedeymo ku aadan wax is daba marin oo loo jeediyay waaxyaha kala duwan ee wasaaradda ay maamusho.
Horaantii sanadkaan ayaa eedeymaha musuqmaasuqa awgood waxaa shaqa joojin lagu sameeyay 5 wasiir oo ka tirsanaa xukuumadda kuwaasoo kala ah wasiirka beeraha Felix Koskei, wasiirka tamarta Davis Chirchir, wasiiradda dhulka Charity Ngilu, wasiirka gaadiidka Michael Kamau iyo wasiirka shaqaalaha Kazungu Kambi.